Khamiis, Maarso 24, 2011 Talaado, Nofeembar 29, 2011 Douglas Karr
Sannadkii hore, waxaan qoray qoraal jawaab u ah Jonathan Salem Baskin, aniga oo ka reebay fekerkiisa ah in Warbaahinta Bulshadu ay khatar ku noqon karto shirkadaha. (Runtii waan kula heshiiyey isaga arrimo badan). Markan - sidaan qabo - Mr. Baskin ayaa qodbay. Shirkad kastaa waxay ku boodeysay warbaahinta bulshada, kordhinta kharashka suuqgeynta ee fagaarahaas, laakiin in yar ayaa aragta soo noqoshada ay rajeynayeen. Burger King wuu dubay
Jimco, Nofeembar 26, 2010 Sabti, Sebtember 26, 2015 Douglas Karr
Waxaan ka fekerayay magacaabista qoraalkan, Maxay tahay sababta Jonathan Salem Baskin u qaldan yahay… laakiin dhab ahaan waan ku raacsanahay isaga qodobo badan oo ku saabsan qoraalkiisa, Khatarta Khatarta ah ee Baraha Bulshada. Waan ku raacsanahay, tusaale ahaan, in baraha bulshada ay inta badan isku dayaan inay ku riixaan ganacsiyada inay ka faa'iideystaan ​​warbaahinta iyaga oo aan si buuxda u fahmin dhaqanka ama ilaha shirkadda ay la shaqeynayaan. Ma noqon karto wax lala yaabo, in kastoo. Waxay isku dayayaan inay iibiyaan sheyga… ayaga